जुत्ता लगाउदा मोजा नलाई लगाउने बानि छ ? यस्ता छन् स्वास्थ्यमा असर पर्ने - ज्ञानविज्ञान
मोजा नलाई जुत्ता लगाउँदा खुट्टा गन्हाउने मात्र नभएर अन्य कैयौं रोग लाग्ने जोखिम धेरै बढ्छ । मोजा नलाई जुत्ता लगाउनु हुन्छ भने बेलैमा सचेत भइहाल्नुहोस् । अहिले विश्वभर नै मोजा नलाई जुत्ता लगाउने फेसन चलेको छ । कलेज अफ पोडियाट्रीका अनुसार यो नयाँ फेसनले पुरुषमा फंगल इन्फेक्सनको जोखिम बढेको छ । फेसन पत्रिकाहरू र क्याटवाकमा अधिकांश मोडल तथा प्रशिक्षकहरू मोजाबिनै मोडलिङ गरिरहेका देखिन्छन् ।
के तपाईंलाई थाहा छ, स्वास्थ्यमा यसको प्रभाव कस्तो पर्छ ?
‘सामान्यतया एक दिनमा हाम्रा खुट्टाबाट ३ सय मिलिलिटर पसिना निस्कन्छ’, एम्मा स्टिफेन्सन भन्छिन्, ‘धेरै आद्र्रता र गर्मीका कारण कसै कसैका खुट्टामा फंगल इन्फेक्सन हुन सक्छ ।’
उनका अनुसार खुट्टामा धेरै पसिना आउनुको परिणाम खराब हुनसक्छ ।
युएफसी बक्सिङ च्याम्पियन कनर म्याकग्रेगरजस्ता बक्सरलाई बक्सिङ नगरेका बेला उनको खुट्टामा फंगल इन्फेक्सन हुने जोखिम छ भनेर बताउन कठिन छ । यति थाहा पाउँदा पाउँदै पनि तपाईं नांगै खुट्टा जुत्तामात्र लगाएर आफूलाई कुनै कार्यक्रममा स्टाइलिस देखाउन चाहनुहुन्छ भने तलका तीन कुरामा ध्यान दिनुहोला ।
Topics #मोजा #स्वास्थ्य
Don't Miss it कान दुखेमा यसरी घरैमा उपचार गर्न सकिन्छ
Up Next महिलाहरुको महिनावारी (रजस्वला) बारे जान्नै पर्ने १० कुराहरु
अब आफ्नै कौसीमा खेती गर्ने कि ? कसरी गरिन्छ कौसीमा खेती जानिराखाैँ
विषेशगरी शहरी क्षेत्रमा बस्ने मानिससँग जमिन कम हुन्छ । कतिपयसँग त हुँदै हुँदैन। त्यस्तो ठाउँमा मलिलो कालो माटोको, कम्पोस्ट वा…